काभ्रेका ४२ वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन वडामा कसको जित ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
काभ्रे जिल्लामा १३ स्थानीय तहमध्ये ६ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाका ४२ वटा वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । जिल्लाका १ सय ३५ वडामध्ये ४२ वडाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरिएको छ । जसमध्ये १९ वडामा नेपाली कांग्रेसले जितेको छ भने १५ वटा वडामा नेकाप (एमाले) ले जित हात पारेको छ । यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ६ र स्वतन्त्र उम्मेवदारले १ स्थानमा हासिल गरेको हो ।
जिल्लाको महाभारत गाउँपालिका ४ वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक हुदाँ वडा नं। १ र २ मा माओवादी, २ र ३ मा कांग्रेसले जित हात पारेको छ । पोखरीचारी गाउँपालिकाको वडा १ मा कांग्रेस,२ मा एमाले र ३ मा माओवादीले विजयी भएको हो ।
यसैगरी, नमोबुद्ध नगरपालिकामा वडा १ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारले र २ र ३ मा कांग्रेसले जितेको छ । तेमाल गाउँपालिकामा वडा १ मा एमाले जितेको छ । बेनाथचोक गाउँपालिका वडा १ मा कांग्रेस विजयी भएको छ ।
त्यसैगरी, रोशी गाँउपालिका वडा नं. १ मा एमाले, २ र ३ मा कांग्रेस निर्वाचित भएको छ । भुम्लु गाउँपालिका वडा १ मा माओवादी, २ र ५ मा कांग्रेस र ३,४ र ६ मा एमाले जित हासिल गरेको छ ।
बनेपा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल समाजवादीबीच गठबन्धन भएको थियो । नगरपालिकाका ४ वडाको मतपरिणाम सर्वाजनिक हुदाँ १ र ४ मा एमाले र २ र ३ मा कांग्रेस विजयी भएको छ ।
यस्तै, धुलिखेल नगरपालिकामा ६ वटाको अन्तिम परिणाम आउँदा वडा १,४ र ६ मा कांग्रेस र २,३ र ५ मा एमालेले जित हासिल गरेको छ । धुलिखेलमा गठबन्धन भै मेयरमा नेकपा एकिकृत समाजवादी परेता पनि कांग्रेसको विद्रोही र एमाले उम्मेदवार बीच प्रतिस्वर्धा भइरहेको छ ।
पनौती नगरपालिका वडा १ मा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भएको छ । यो वडामा बिगतमा एमाले सुरक्षित रहेको मानिएको थियो तर यस निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारले २०० मत अन्तरमा एमालेलाई पराजित गरेको हो । पनौती कै वडा २ र ३ मा भने एमाले विजयी भएको छ ।
मण्डन देउपुर नगरपालिकामा १ र ४ वडामा एमाले र २ र ३ वडामा कांग्रेस विजयी भएको छ ।
त्यस्तै, पाचँखाल नगरपालिकाको वडा नं. १३ मा मा भने मतदानको दिन विवाद हुदाँ मतदान स्थगित भएको थियो अब जेठ ३ गते पुन कोसिदेखामा मतदान कार्यक्रम हुनेछ ।